October 5, 2020 News36mediaLeaveaComment on हातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ? एकपटक अवस्य पढ़िदिनुहोला”
शारदा शर्मा – आज भन्दा ७ बर्ष अगाडि ! तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रुकुमको प्राङ्गणमा केटीहरुको भिडभाडको बिचमा देखिएको एउटा विचित्रको दृश्यले मेरो ध्यान तान्यो । दुबै हात जमिनमा टेकेर पुरै शरीर लतार्दै, घिर्सिदै हिड्ने मानिसको त्यो अवस्थाले मेरो मात्र हैन धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो । असह्य शा रिरीक पी डा बोकेर शरीरलाई ढुंगा र […]
October 5, 2020 News36mediaLeaveaComment on नौ महिनादेखि नक्कली प्रहरी निरीक्षकलाई सक्कली प्रहरीले सलाम ठो’किरहे, अन्ततः यसरी खुल्यो रहस्य
काठमाण्डौ । नेपालमा प्रहरीको फुली र कपडा सजिलै किन्न पाइन्छ । हामीले सिनेमा तथा नाटकमा कलाकारले प्रहरीको बर्दी लगाएर अभिनय गरेको देखेका छौं । तर नेपालमै अनौठो घटना भएको छ । एक प्रहरी निरीक्षकले प्रहरीकै गाडी प्रयोग गरेर तराईका चौकी चौकी घुमे, अन्य तल्लो दर्जाका प्रहरीको सलाम पनि खाई रहे । अन्तत झुटको पर्दा उघारिएको […]
October 5, 2020 News36mediaLeaveaComment on सलाम छ ! भगवान जस्तै श्रीमान ! सबैले आस मा’रेकी श्रीमतीलाई यसरी ब’चाए, (भिडियो)
काठमाण्डौ। निकै भलादमी देखिने पुरुषहरू पनि घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुदाँहुँदै बाहिरी सम्बन्धमा रहने, श्रीमती र छोराछोरीलाई दुःख दिने, कुटपिट गर्ने, यातना दिने गरेका घटना आजभोली दिनहुँ जसो बाहिर आइरहेका छन् । यद्यपि बाहिर आएका घ’टना एकाध मात्रै हुन् । दोब्बर, तेब्बर घटना भित्रभित्रै लुकाइन्छन् । इज्जतको डरले बाहिर ल्याइदैनन् । तर गुल्मी धुरकोट, पिपलधार […]
October 5, 2020 News36mediaLeaveaComment on युवाले गरे किशोरी बला’त्का’र, किशोरीका भाइले गरे युवाको धु’लाई, घटना गाउँमै मिलाउनेको भयो यस्तो हालत
काठमाण्डौं । घटना सिरहा जिल्लाको हो । एक युवाले एक किशोरी माथि अनैतिक काम गर्छन् । यो थाहा पाएपछि किशोरीका भाइले ती युवाको नराम्ररी धु’लार्ई गर्छन् । गाउँको कुरा भएकाले गाउँमै मिलाउने भन्दै केही अगुवा कागज गराउन आउँछन् । ती अगुवाको अहिले भा गा भा ग भएको छ । अहिले प्रहरीले घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गराउने […]